Waaheen Media Group » Gabadh Maydka Aabahed oo 12 Sanno uu Guriga uu u yaalo Home
Browse:Home Articles Gabadh Maydka Aabahed oo 12 Sanno uu Guriga uu u yaalo	Gabadh Maydka Aabahed oo 12 Sanno uu Guriga uu u yaalo
Comments Off	Gobolka Toraja ee jasiiradda Sulawesi ee dalka Indonesia dadka dhintay waxay qayb ka yihiin nolol maalmeedka caadiga ah.
“Aabahaa ka waran?” ayuu qof marti ahi yidhi, jawigii ayaana si dhakhso ah isu badalay oo qof kaste wuxuu fiiriyay guri yar oo meel gees ah ka dhisan halkaas oo uu yaalo nin duq ah oo saaraan sariir qurux badan.
Mamak Lisa oo ah gabadhiisa ayaana qofkii su’aalay xaaladda aabaheed ugu jawaabtay “wali wuu xannuunsan yahay.”
Mamak oo muusoonaysa ayaa u dhaqaaqday dhanka ninka duqa ah, iyada ii tartiib u gacanqaadaysa ayay tiri “Aabo marti ayaa kuu timid si ay kuu arkaan, waxaan rajaynayaa in aadan dhibsan doonin ama aadan ka xanaaqi doonin.
Mid ka mid ah oo qoslaya ayaana yidhi “awoowgay muxuu markaste u jiifaaa?, mid kii kalana wuxuu kor u yidhi “awoowe toos oo kaalay aan wax cunnee!”
Mamak Lisa ayaa markaas tidhi awoowe ha dhibina wuu jiifaa ee, “waad ka xanaajin doontaan”.